I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uNorma And Patrick iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Uluhlu lelegumbi kwifama ebuyiselweyo yangaphambi kwemfazwe yamakhaya kwiFama yaseCrickenwood. Amagumbi eendwendwe akwindlu enkulu yasefama kwaye abelana ngeendawo eziqhelekileyo zekhitshi, ithala leencwadi, igumbi lokuhlala kunye negumbi elikhulu. Ugonyo lwe-Covid19 luyafuneka.
Le yifama encinci esebenzayo eneenkomo kunye namahashe. Kukho indawo yokupaka eninzi. Kukho izinja ezininzi ezinobuhlobo kwipropati. Ifama imalunga neyure ukusuka eBaltimore, MD, Washington, DC, Harpers Ferry, WV kunye neGettysburg, PA. UFrederick, MD yimizuzu engama-20.
Igumbi leSampler: Igumbi lokulala elincinane elinebhedi elingana neTwin enomandlalo ogwebu lwenkumbulo kwiphiko elitsha malunga ne-5' ukusuka kumagumbi okuhlambela amabini agcweleyo ekwabelwana ngawo. Enye ifestile ijonge kwipatio. Eli gumbi lihlala enye kuphela. Kukho isefu encinci egumbini.
Amanye amagumbi kwiFama yaseCrickenwood:
Igumbi leHydrangea: Igumbi lokulala kwiphiko elitsha lendlu. Inomandlalo we-queen omfutshane kunye ne-memory foam umatrasi, indawo yomlilo yombane, i-microwave kunye nefriji. Eli gumbi linokongezwa ibhedi kwaye lihlalise abantu ababini.
Igumbi le-Quilt: Igumbi lokulala elinebhedi ye-antique epheleleyo kwindawo yembali yendlu. Ithatha ezimbini.
Igumbi leSilhouette: Igumbi lokulala elinendawo yokulala ye-Queen yobungakanani benkumbulo kwindawo endala yendlu. Inendawo yomlilo yombane, imicrowave kunye nefriji. Ithatha ezimbini.
Igumbi le-Victorian: Igumbi lokulala elinobukhulu obugcweleyo bebhedi kunye ne-memory foam umatrasi kwindawo eyimbali yendlu yasefama. Inendawo yomlilo yombane. Ithatha ezimbini.
Igumbi ngalinye linefolda eneencwadana, iimephu kunye nemiyalelo yokusebenzisa i-intanethi engenazingcingo kunye nesefu. Iinkonzo zokusasaza zikamabonwakude kunye neemuvi zinokujongwa eKhitshini, kwiThala leencwadi okanye kwithiyetha yangaphakathi kwiGumbi elikhulu. Siziikhilomitha ezingama-35 ukuya nokuba yiBaltimore okanye eWashington DC. Emantla yiGettysburg, PA, Antietam, MD, kunye noFrederick, MD. Ifama ikwiikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwiMarike eNtsha, MD "Antiques Capital yaseMaryland". Jonga iwebhusayithi yeFredericktourism.org malunga "nento-omele uyibone kwaye wenze" kunye nekhonkco kwiipaki zendawo, iindawo zembali, iindawo ezithengisa utywala, iiwayini, iivenkile, iigalari zobugcisa kunye nokuzonwabisa.
4.79 ·Izimvo eziyi-51
4.79 out of 5 stars from 51 reviews
4.79 · Izimvo eziyi-51
Le yifama yembali yokusebenza kwindawo yenguqu yedolophu eneenkomo, amahashe kunye nedama elinemfuyo. Indawo yoxolo. Simalunga neyure ukusuka nokuba kumbindi wedolophu DC okanye eBaltimore. Amadabi e-Antietam kunye ne-Gettysburg. kunye Harper's Ferry, WV malunga 45 imizuzu kude.
Kufuphi, iidolophu zembali zaseMaryland zeNew Market (Antiques Capital of Maryland) kunye neMt. Airy ziikhilomitha ezimbalwa ukusuka kuthi ngokulandelelanayo eNtshona naseMpuma kwiPike yeSizwe eNdala.
Ukufumana ukutya okuphucukileyo kunye nokuthenga uFrederick, MD imalunga nemizuzu engama-20 ukuya kwidolophu eyimbali. UFrederick likhaya kwiMyuziyam yezoNyango yeMfazwe yaseKhaya, iNdawo yeDabi yeMonocacy kunye nedumela elithi "Clustered Spires" ledolophu yaseFrederick.
Ngeziganeko zangoku zasekhaya yiya kwiwebhusayithi yeFrederick County Tourism. Jonga iwebhusayithi Frederick.tourism.org kwaye ukhethe ikhonkco "nto-omawuyibona-noyenza" ngolwazi malunga neepaki zendawo, iindawo zembali, iindawo ezithengisa utywala, iiwayini, iivenkile, iigalari zobugcisa kunye nokuzonwabisa.
Ababuki zindwendwe bakho kubusuku bokuqala bokuhlala kondwendwe kwaye ngesiqhelo ngalo lonke ixesha lokuhlala. Sithanda ukushiya iindwendwe zodwa ngaphandle kokuba zicele ukuba senze ngenye indlela. Uninzi lwabantu lusixelele ukuba luza kweli lizwe ukuze luzolile kunye nokuzola nokubaleka kuyo yonke loo nto. Siyawuhlonela umnqweno wabo wokwenjenjalo.
Ababuki zindwendwe bakho kubusuku bokuqala bokuhlala kondwendwe kwaye ngesiqhelo ngalo lonke ixesha lokuhlala. Sithanda ukushiya iindwendwe zodwa ngaphandle kokuba zicele ukuba sen…